Boxer Evan Holyfiled: tombon-tsoa ho an'ny mpiara-miasa amin'ny fahasalamana vaovao amin'ny CBD
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Boxer Evan Holyfiled: tombon-tsoa ho an'ny mpiara-miasa amin'ny fahasalamana vaovao amin'ny CBD
Evan Holyfield ao amin'ny lazan'ny ady totohondry dia miezaka mampahafantatra ny tombotsoan'ny CBD amin'ny fahasalamana sy ara-pahasalamana miaraka amin'ny orinasa iray ao an-tanàna.
Ny orinasa Georgia Hemp dia nanambara ny fiaraha-miasa amin'ny mpanao ady totohondry antonony, Evan "Yung Holy" Holyfield, izay nanondro azy ny mpiara-miasa amin'ny fomba fiaina sy fahasambarana vaovao ho an'ny orinasa. Ity fiaraha-miasa amin'i Holyfield ity dia tonga tamin'ny fotoan-dehibe teo amin'ny asany satria efa miomana amin'ny tolona manaraka ny 23 Oktobra miaraka amin'ny fanantenana hanatsara ny filalaovany ady totohondry matihanina tsy resy hatreo amin'ny 8-0.
"Ny Georgia Hemp Company dia faly hiara-hiasa amin'i Holyfield sy ny ekipany mba hampandroso ny fikatsahana ny hatsaran-tarehintsika", hoy i Joe Salome, Managing Partner an'ny The Georgia Hemp Company. "Ny TGHC sy ny ekipa Holyfield dia manaporofo fa mifanentana tsara amin'ny tontolon'ny varotra ara-panatanjahantena ankehitriny ary ohatra miavaka amin'ny atleta maoderina ankehitriny miara-miasa amin'ny marika fanta-daza sy ny vokatra misy fiantraikany. Ireo no fiaraha-miasa izay mametraka fototra ho an'ny fiaraha-miasa amin'ny atleta ho avy. Ny 23 Oktobra dia vao manomboka. ”
Zanaky ny mpanao ady totohondry malaza, Evander Holyfield, Evan dia liana fatratra tamin'ny fitomboan'ny habaka CBD ary nanandrana ny fomba fanarenana izay afaka manampy azy sy ireo atleta hafa manerana izao tontolo izao. Momba ny fiaraha-miasa vaovao, Holyfield dia naneho hevitra hoe: "Tena mirehareha aho fa miara-miasa amin'ny The Georgia Hemp Company. Tsy eo an-toerana ihany izy ireo any amin'ny tanàna niaviako any Atlanta, fa amin'ny maha-atleta ahy, dia zava-dehibe amiko ny mampiasa vokatra voajanahary ary hanampy amin'ny fampandehanana ny asako amin'ny ambaratonga manaraka. Manantena aho fa hampiroborobo ny tombontsoa ara-pahasalaman'ny CBD ny fiaraha-miasantsika - tsy ho an'ny atleta ihany, fa ho an'ny rehetra - ary ny fomba ahafahany manampy ny fizotran'ny fanarenana sy ny fahasalamana amin'ny ankapobeny.
"Ity fiaraha-miasa ity dia manampy amin'ny fampifantohana ny zavatra azon'ny CBD atao amin'ny vatana sy ny firesahana ny fahasalamana amin'ny lafiny fiomanana sy fisorohana," hoy i Ryan Dills, Managing Partner an'ny The Georgia Hemp Company. "Manantena izahay fa hitondra fampifanarahana amin'ny fomba fanarenana sy fanarenana izay tena ilaina amin'ny fanatanjahantena misy fiantraikany / ady lehibe."